Mayelana NATHI - HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD
SIYAKWAMUKELA KUFIZA TECHNOLOGY
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2005 futhi ikomkhulu lise shijiazhuang okuyindawo enhle yaseChina. Ibhizinisi eliyinhloko lifaka phakathi ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo eyenziwe ngamakhemikhali nezimayini, kanye nokuthekelisa ubuchwepheshe be-chlorine dioxide. Inkampani yethu, ihlose ukusebenza okungaguquguquki nentuthuko esimeme, igcizelela njalo okholweni ukuze yakhe umkhiqizo omuhle wenkampani futhi iwine imakethe namakhasimende anekhwalithi enhle yomkhiqizo nensizakalo engagodliwe. Inkampani yethu ithole imiklomelo eminingi enjengokuthi "shijiazhuang ibhizinisi elithembekile", "iBanga A lokukhiqiza okuphephile nebhizinisi elinokwethenjelwa" kanye "nebhizinisi eliyimodeli lokwakhiwa kwesiko lezokuphepha". Manje Inkampani yethu ikhule yaba yinkampani ehamba phambili embonini futhi yatuswa kakhulu nokuqashelwa.
Inkampani yethu inamagatsha amaningi nezisekelo zokukhiqiza ezweni lonke, inezindlela zokukhiqiza ezivuthiwe zamakhemikhali eziphilayo kanye namaqembu aphambili enkampani yokukhiqiza.Ikampani yethu nayo ibisisebenza embonini yamakhemikhali iminyaka eminingi, futhi ivolumu yokuthekelisa ihlala ihlala phambili komkhakha. Manje inkampani izuze ukusebenza okuhle kwebhizinisi futhi iwine imboni ephezulu idumela.
Ngesikhathi sokunwetshwa kwebhizinisi, inkampani yethu igcina ukushintshana nokubambisana nenqwaba yabakhiqizi ekhaya nakwamanye amazwe, futhi yathuthukisa ubudlelwano obuhle nenani elikhulu lezinkampani ezisohlwini namabhizinisi ezizwe ngezizwe e-Southeast Asia, Europe, Australia, Middle East nakwamanye amazwe nezifunda zaphesheya kwezilwandle. .
Isungulwe eminyakeni edlule, inkampani yethu ithole amakhasimende amaningi azinzile ekhaya nakwamanye amazwe, futhi ithole impendulo enhle kubo bonke abasebenzisi bezinqubo zokukhiqiza ezithuthukile, ikhwalithi ephezulu yemikhiqizo kanye nensizakalo enhle kakhulu ye-aftersales. Ngokuthuthukiswa okuqhubekayo kwedumela, kanye nokuthuthuka okuqhubekayo kwenqubo yokukhiqiza nokuphatha, ivolumu yokuthengisa yenkampani yethu iyaqhubeka ikhula.
Shijiazhuang ibhizinisi onokwethenjelwa
Ibanga A lokukhiqiza okuphephile nebhizinisi elithembekile
Imodeli yebhizinisi lokwakhiwa kwesiko lokuphepha
Ukulungele ukuthola okwengeziwe ngathi?
Inhloso yethu "ukuthola ukwethenjwa nokusekelwa kwakho ngemisebenzi yethu eqotho nemikhiqizo esezingeni eliphakeme; sizuzane futhi sifinyelele esimweni sokuwina." Inkampani yethu izimisele ukubambisana ngobuqotho nazo zonke izizinda zokuphila ekhaya nakwamanye amazwe ukwakha ikusasa eliqhakazile!